Uphahluke ngesifiso sesicoco owoSuthu - Impempe
Uphahluke ngesifiso sesicoco owoSuthu
UMakhehleni Makhaola nozakwabo
Kuvele izimpawu zokuthi seziqalile izinkulumo ezithinta ukuphupha ngamathuba esicoco seDStv ekhempini yaMaZulu FC njengoba injini yaleli qembu, uMakhehleni Makhaula – ukusho lokhu sakuphahluka.
Asikho kangako isidingo sokubasola aboSuthu uma becabanga ngesicoco ngoba basendaweni yesithathu kwilogi kodwa babambene ngamaphuzu neGolden Arrows esendaweni yesibili.
IMamelodi Sundowns eqhwakele igcono kuMaZulu ngamaphuzu ayisithupha kodwa isenemidlalo emibili eyigodlile.
Ngokusho kwalo mdlali ngaphambi kokuthi babhekane neStellenbosch FC emdlalweni weDStv Premiership ngoMgqibelo ngo 3 ntambama, eKapa, kumqoka ukuthi bawine ukuze bengeke badedele iSundowns ivule igebe.
“Kusemqoka ngendlela engachazeki ukuqoqa amaphuzu agcwele kulo mdlalo ukuze singeke siyeke iSundowns ihambe kakhulu,” kusho yena.
Kuhlukile nokho lokhu okushiwo uMakhaula kokuhlale kushiwo umqeqeshi wakhe uBenni McCarthy ngesicoco.
Uhlale ezihlangula embangweni kodwa acashe ngokuthi okumqoka kubona ukuhlala eduze kwalaba abathishwe ukudla isicoco.
Okwenza leli qembu laseThekwini lihambele phezulu kulezi zinsuku ukuthi lisanda kuqopha umlando wokunqoba imidlalo emihlanu ilandelana okuyinto eyagcina ukwenzeka Osuthwini eminyakeni engaphezulu kwengu-30.
“Siwulungisela kahle umdlalo wethu neStellies okufakazelwa indlela wonke umuntu abezikhandla ngayo maphakathi nesonto. Kucacile ukuthi sonke siyaqonda ukuthi amqoka kangakanani amaphuzu amathathu lapha.
“Uma sinqoba lapha sizosondela kwiSundowns. Uma sesindaweni yesibili kuzobe sekuyiyona kuphela emi phambi kwethu.
“Kuhle ngoba sisazodlala nayo iSundowns okungesinye sezinongo ngomdlalo wethu neStellies. Uma sinqoba sivala igebe kwabaphezulu,” kusho yena.
Yize ukudlalela ekuhambeni kuvamise ukuza nezinkinga kodwa kubukeka sengathi kuleli qembu kuhlukile.
“Asikungabazi ukuthi umdlalo uzoba nzima kodwa ngineme ngendlela esihlele ngayo. Engikwaziyo ukuthi sinawo amava okubuya namaphuzu agcwele ekuhambeni.
“Sikwazi konke okuhle ngeStellies kanjalo nalapho bebuthaka ngakhona siyazi. Okwethu ukulalela umqeqeshi bese siqinisekisa ukuthi siyayilandela imiyalelo,” kusonga uMakhaula.
IStellies izokwamukela Usuthu ibhodla umlilo kwazise iwadedele isiwaphethe ngesandla amaphuzu ibhekene neKaizer Chiefs muva nje.
Previous Previous post: Kuyazwela kuMbali ukugqoza kwemijaho
Next Next post: Ifihle induku emqubeni, yadukela nayo iSundowns ithola isibhaxu